iOS (II) တွင်သင်၏ privacy နှင့်လုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်ရန်နည်းလမ်း ၁၅ ခု | အိုင်ဖုန်းသတင်း
iOS (II) တွင်သင်၏ privacy နှင့်လုံခြုံရေးကိုတိုးတက်စေရန်အစီအမံ ၁၅ ခု
Alvaro Fuentes | | iOS ကို, NOTICIAS
လူတိုင်းဘယ်လိုသိနိုင်ဖြစ်သင့်သည် သင်၏လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားရမည်အထူးသဖြင့်ဤကဲ့သို့သောကာလ၌။ iPhone နှင့် iPad အသုံးပြုသူများသည် Android သုံးစွဲသူများအားစိတ်ငြိမ်သက်မှုအနည်းငယ်ပေးနိုင်သော်လည်းဝက်ဘ်ဆိုက်တီထွင်သူများနှင့် Apple ပင်လျှင်ထုတ်ကုန်များမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
၎င်းကို ပိုမို၍ ပိုမိုနားလည်စေရန်နှင့်သင်၏လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေးကို iOS တွင်ပိုမိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းများကိုလေ့လာရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သင်ပို့မည့်နည်းလမ်းများစွာကိုပြုစုခဲ့သည်။ နှစ်ခုအသေးစိတ်ပေးပို့။ ဒါကဒုတိယပါ၊ ဒါပေမယ့်သင်ပထမ ဦး ဆုံးစစ်ဆေးနိုင်သည် ဒီမှာ.
မက်ဆေ့ခ်ျအဟောင်းများကိုသိမ်းဆည်းရန်မလိုအပ်ပါက iOS သည်၎င်းတို့အားအလိုအလျောက်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ ချိန်ညှိချက်များကိုဖွင့်ပါ၊ ပြီးနောက်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုရွေးချယ်ပါ။ သို့ Scroll လုပ်ပြီးမက်ဆေ့ခ်ျများသိမ်းဆည်းကိုအသာပုတ်။ တစ်နှစ်မှရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းရွေးချယ်ပါ။ သင့်ရွေးချယ်မှုထက်ပိုသောမည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျမဆိုစက်မှအလိုအလျောက်ပျောက်ကွယ်သွားမည်။
Safari ရှိပုဂ္ဂလိကလှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနည်းလမ်းသည်သင်၏စက်ကိရိယာပေါ်တွင်သမိုင်းမှတ်တမ်းများ၊ logins များမထားပဲသင်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ Safari ကိုဖွင့်ပြီးညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိ tabs icon ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Private ကိုရွေးပါ။
အကယ်၍ သင်၏ iPhone နှင့် iPad အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုသိသောကြော်ငြာရှင်များကသင့်ကိုကြောက်လန့်နေပါက၎င်းကိုမြုပ်နိုင်သည်။ ဤရွေးစရာကိုချိန်ညှိချက်များတွင်တွေ့နိုင်သည်။ privacy ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက်အောက်ခြေတွင်ကြော်ငြာခြင်း။ အဘို့အကန့်သတ်ကိုသက်ဝင် ကြော်ငြာခြေရာခံ.
အဓိက privacy ချိန်ညှိချက်များသို့ပြန်သွားပါ၊ တည်နေရာဝန်ဆောင်မှုများကိုအသာပုတ်ပါ။ နောက်အောက်ခြေရှိ System Services ကိုနှိပ်ပါ။ ကျနော်တို့တည်နေရာခြေရာခံခြင်းကိုပိတ်ထားတာပေါ့။ ပေါ်လာသောတည်နေရာပေါ်မူတည်သည့်ရွေးချယ်မှုများ (သတိပေးချက်များ၊ အက်ပလီကေးရှင်းကြေငြာချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များ) သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောမည်သည့်အရာအတွက်မဆိုဤအရာကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။
Settings ၏တည်နေရာ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားအတွင်းသင်၏နောက်ဆုံးအလုပ်မှာပိတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏တည်နေရာကိုသူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်မျှဝေပါ။ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ Find My Friends လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်ဤအရာသည်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Share My Location သည် Settings မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရှိနေပြီးသင်အပေါ်သို့အသာပုတ်။ ၎င်းကိုပိတ်နိုင်သည်။
VPN များသည်မတူညီသောအိုင်ပီလိပ်စာတစ်ခုမှကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်သင်၏အထောက်အထားကိုဖုံးကွယ်ထားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ များစွာသောအခမဲ့ VPN ဝန်ဆောင်မှုများကို App Store တွင်ရနိုင်သည်။ Betternet သည်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် VPN ကိုအသက်သွင်းရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ထားရန်သင်လုပ်ရန်အားလုံးသည် Settings မှညာဘက်ရှိခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ iPhone နှင့် iPad သည်တစ်မိနစ်မလှုပ်မယှက်ဖြစ်ပြီးနောက်အလိုအလျောက်သော့ခတ်သင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ screen သည်ပိတ်သွားပြီး၎င်းကို Touch ID (သို့) ထပ်မံဝင်ရန် passcode ဖြင့်သော့ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ စက်ပစ္စည်းမျက်လုံးများမှဝေးဝေးနေစေရန်အတွက်၎င်းသည်ပုံမှန်အချိန်ကိုစက္ကန့် ၃၀ အထိလျှော့ချနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်သည်သင်၏ Display menu နှင့် brightness settings သို့သွားရပါမည်။ အလိုအလျောက်သော့ခတ်ခြင်းကိုရွေးချယ်ပြီးအချိန်ကိုစက္ကန့် ၃၀ သတ်မှတ်ပါ။
အကယ်၍ သင်၏ကိရိယာကိုကလေးများနှင့်မျှဝေပြီး၎င်းတို့သည်အချို့သောအင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးမပြုလိုပါကကန့်သတ်ချက်များဖန်တီးရန်ရွေးချယ်စရာသည်သင့်အားပစ္စည်းများစွာပေးသည်။ ချိန်ညှိချက်များကိုဖွင့်ပါ၊ အထွေထွေကိုအသာပုတ်။ ကန့်သတ်ချက်များကိုအသာပုတ်ပါ။ မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်များကိုဖွင့်ထားသည်၊ အချို့သောအက်ပ်များ၊ iTunes စတိုးကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတွင်း ၀ ယ်ယူမှုများအားသင်ပိတ်နိုင်သည်။ iTunes ကိုအသက်အရွယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်လည်းကန့်သတ်နိုင်သည်၊ privacy ချိန်ညှိချက်များနှင့်အခြားအရာများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အနေအထားအရမည်သည့်အရာကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုကြည့်ရန်သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS (II) တွင်သင်၏ privacy နှင့်လုံခြုံရေးကိုတိုးတက်စေရန်အစီအမံ ၁၅ ခု
၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်၏စစ်ထုတ်ခြင်းအရ iPhone 8 ဖြစ်သည်
iOS ပေါ်ရှိသင်၏ privacy နှင့်လုံခြုံရေးကိုတိုးတက်စေရန်အစီအမံ ၁၅ ခု (၁)